၃။ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance condition) (9 of 9) – Dhamma Training Center
၃။ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance condition) (9 of 9)
ဘုရားအလောင်းတော် ဇနကမင်းသား၏ အဓိပတိထိုက်သည့် လုံ့လ၀ီရိယ zawgyi
မဟာဇနကဇာတ်တော်၌ ဘုရားအလောင်းတော် ဇနကမင်းသား၏ ခမည်းတော်ကို ဘထွေးတော်က စစ်ပွဲဆင်နွဲပြီး မိထိလာပြည်ကို အရယူသွားတော့သည်။ ဘုရားအလောင်းတော် ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသည့် မိဖုရားခေါင်ကြီးသည် ကိုယ်လွတ် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ သားကလေး ဖွားမြင်လာသောအခါ မင်းသား ငယ်၏ အဖိုးအမည်ဖြစ်သည့် ဇနကမင်းသားဟု မှည့်ခေါ်၏။
အရွယ်ရောက်လာသောအခါ ဖခင်အစစ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ထား၍ မဖြစ်တော့သည့်တစ်နေ့ မယ်တော် ကြီးက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ကို ပြောပြ၏။ ဇနကမင်းသားကလေးက အဖ၏တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန် စီမံ ရာတွင် ဥစ္စာဘဏ္ဍာကို ဦးစွာ စုဆောင်းရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
မယ်တော့ထံမှ ဥစ္စာငွေကြေးအချို့ကို အရင်းအနှီးအဖြစ်ယူပြီး မယ်တော်ကြီး အတန်တန်တားသည့် ကြားကပင် ကုန်ကူးသန်းရန်အတွက် သုဝဏ္ဏဘူမိသို့ ရွက်သင်္ဘောဖြင့် ထွက်ခွာလာ၏။ ပင်လယ်ပြင်တွင် လေမုန်းတိုင်းမိသဖြင့် သင်္ဘောပျက်လေသည်။ ထိုအခါ မင်းသားသည် သင်္ဘောရွက်တိုင် ထိပ်သို့တက်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး ထောပတ်ဆီများ သုတ်လိမ်းပြီး သင်္ဘောနှင့် အဝေးဆုံးရောက်အောင် ခုန်ချပါတော့သည်။ ပင်လယ်ပြင်တွင် မည်သည့်အစာမှ မစားရသော်လည်း ဥပုသ်နေ့၌ ဥပုသ်စောင့်တော်မူသေးသည်။ မင်းသား သည် လုံ့လ၀ီရိယ မလျော့ချဘဲ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး မိထိလာပြည်သို့ ရည်မှန်းကာ ကူးခတ်နေတော့၏။ ခုနစ်ရက် ပြည့်သောနေ့တွင် မဏိမေခလာနတ်သမီးက ကယ်တင်ပြီး မင်းသားရည်မှန်းထားရာ မိထိလာပြည်သို့ ပို့ဆောင် ပေးပါသည်။
ထိုကာလ၌ မိထိလာပြည့်ရှင်ဘုရင် ဘထွေးတော်မင်းတရားကြီး နတ်ရွာစံပြီးချိန် ဖြစ်သဖြင့် စစ်မတိုက် ရဘဲ ဘုရင်အဖြစ်ကို ရောက်တော်မူ၏။ အလောင်းတော်၏ ၀ီရိယသည် ထက်သန်သဖြင့် အတူဖြစ်ဖက် နာမ်တရား များနှင့် စိတ္တဇရုပ်များလည်း ၀ီရိယ၏အလိုအတိုင်း လိုက်ပါပေးရတော့သည်။ အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန်မှ နာမ်တရား အကြီးအမှူးဖြစ်သည့် ၀ီရိယဦးဆောင်ရာသို့ ဆန္ဒ၊ စိတ္တ၊ ၀ီမံသ တို့သည်လည်း ရည်မှန်းရာ ပန်းတိုင်ဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးတော့သည်။
ဆန္ဒ၊ ၀ီရိယ၊ စိတ္တ၊ ၀ီမံသ လေးပါးလုံး တပြိုင်တည်း အဓိပတိမရပါ။ အကြောင်းမှာ အဓိပတိဟူသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သဖြင့် ပြိုင်ဘက်ကင်း၏။ ထို့ကြောင့် ဆန္ဒကအဓိပတိဖြစ်ပါက ကျန်သူတို့ နောက်လိုက်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒခိုင်းသမျှကို လုပ်ပေးရသည်။
ဆန္ဒက ပစ္စယ အကြောင်းတရားဖြစ်လျှင် ကျန်သုံးပါးက ပစ္စယုပ္ပန် အကျိုးတရားဖြစ်၏။ စင်္ကြာမင်းဟူသည် ဤကမ္ဘာမြေပြင်၌ တစ်ဦးတည်း ပိုင်စိုးအုပ်ချုပ်သကဲ့သို့တည်း။
၀ီရိယဦးဆောင်လျှင်လည်း ကျန်သူတို့က နောက်လိုက်ဖြစ်၏။ လောဘစေတသိက်က စိတ်ကို ချယ် လှယ်ပြီး လောဘစိတ် ပြင်းထန်လာပါက လောဘစိတ်က အဓိပတိဖြစ်တော့၏။ ကျန်သူတို့ နောက်လိုက် အဖြစ် လောဘစိတ်အလိုကျ ဆောင်ကျဉ်းပေးရပေတော့မည်။
မကောင်းသော အကုသိုလ်လုပ်ဆောင်မှုအစုစုတို့၌ ဓမ္မသဘာဝကပင် အသိအလိမ္မာ ဉာဏ်ပညာ ၀ိဇ္ဇာ အမောဟမပါဝင်သောကြောင့် စိတ်ဇောအားကြီးသည်နှင့် အမျှ၊ ၀ီရိယထက်သန်သည်နှင့်အမျှ၊ ဆန္ဒ ပြင်းပြသည် နှင့်အမျှ တိုး၍တိုး၍သာ မိုက်ကြပေတော့သည်။ အကြောင်းမှာ ၀ီမံသပညာ၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှု မရသော ကြောင့်ပေတည်း။
အဓိပတိပစ္စည်း၊ ပစ္စယုပ္ပန်၊ သုဒ္ဓသင်္ချာနှင့် မျိုးတူပစ္စည်း
ပစ္စည်းဟူသော အကြောင်းတရားမှာ ဆန္ဒ၊ ၀ီရိယ၊ စိတ္တ၊ ပညာပစ္စယုပ္ပန် ဟူသော အကျိုးတရားမှာ ယှဉ်ဖက်စေတသိက်နှင့် စိတ္တဇရုပ်များတည်း။
ပစ္စယေန ပစ္စယော = အကြောင်းတရားက အကျိုးတရား ဖြစ်ပေါ်အောင် ကျေးဇူးပြုသည်။ (တနည်း အားဖြင့် အကြောင်းတရားရှိလို့သာ အကျိုးတရားဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်)
Reality. ပရမတ် Concept. ပညတ်
ဘုရားအလောငျးတျော ဇနကမငျးသား၏ အဓိပတိထိုကျသညျ့ လုံ့လဝီရိယ pyidaungsu-unicode
မဟာဇနကဇာတျတျော၌ ဘုရားအလောငျးတျော ဇနကမငျးသား၏ ခမညျးတျောကို ဘထှေးတျောက စဈပှဲဆငျနှဲပွီး မိထိလာပွညျကို အရယူသှားတော့သညျ။ ဘုရားအလောငျးတျော ကိုယျဝနျလှယျထားသညျ့ မိဖုရားခေါငျကွီးသညျ ကိုယျလှတျ ထှကျပွေးလှတျမွောကျခဲ့သညျ။ သားကလေး ဖှားမွငျလာသောအခါ မငျးသား ငယျ၏ အဖိုးအမညျဖွဈသညျ့ ဇနကမငျးသားဟု မှညျ့ချေါ၏။
အရှယျရောကျလာသောအခါ ဖခငျအစဈအမှနျကို ဖုံးကှယျထား၍ မဖွဈတော့သညျ့တဈနေ့ မယျတျော ကွီးက ဖွဈကွောငျးကုနျစဉျကို ပွောပွ၏။ ဇနကမငျးသားကလေးက အဖ၏တိုငျးပွညျကို ပွနျလညျရယူနိုငျရနျ စီမံ ရာတှငျ ဥစ်စာဘဏ်ဍာကို ဦးစှာ စုဆောငျးရမညျဟု ဆုံးဖွတျပါသညျ။
မယျတော့ထံမှ ဥစ်စာငှကွေေးအခြို့ကို အရငျးအနှီးအဖွဈယူပွီး မယျတျောကွီး အတနျတနျတားသညျ့ ကွားကပငျ ကုနျကူးသနျးရနျအတှကျ သုဝဏ်ဏဘူမိသို့ ရှကျသင်ျဘောဖွငျ့ ထှကျခှာလာ၏။ ပငျလယျပွငျတှငျ လမေုနျးတိုငျးမိသဖွငျ့ သင်ျဘောပကျြလသေညျ။ ထိုအခါ မငျးသားသညျ သင်ျဘောရှကျတိုငျ ထိပျသို့တကျကာ တဈကိုယျလုံး ထောပတျဆီမြား သုတျလိမျးပွီး သင်ျဘောနှငျ့ အဝေးဆုံးရောကျအောငျ ခုနျခပြါတော့သညျ။ ပငျလယျပွငျတှငျ မညျသညျ့အစာမှ မစားရသျောလညျး ဥပုသျနေ့၌ ဥပုသျစောငျ့တျောမူသေးသညျ။ မငျးသား သညျ လုံ့လဝီရိယ မလြော့ခဘြဲ ခုနဈရကျပတျလုံး မိထိလာပွညျသို့ ရညျမှနျးကာ ကူးခတျနတေော့၏။ ခုနဈရကျ ပွညျ့သောနတှေ့ငျ မဏိမခေလာနတျသမီးက ကယျတငျပွီး မငျးသားရညျမှနျးထားရာ မိထိလာပွညျသို့ ပို့ဆောငျ ပေးပါသညျ။
ထိုကာလ၌ မိထိလာပွညျ့ရှငျဘုရငျ ဘထှေးတျောမငျးတရားကွီး နတျရှာစံပွီးခြိနျ ဖွဈသဖွငျ့ စဈမတိုကျ ရဘဲ ဘုရငျအဖွဈကို ရောကျတျောမူ၏။ အလောငျးတျော၏ ဝီရိယသညျ ထကျသနျသဖွငျ့ အတူဖွဈဖကျ နာမျတရား မြားနှငျ့ စိတ်တဇရုပျမြားလညျး ဝီရိယ၏အလိုအတိုငျး လိုကျပါပေးရတော့သညျ။ အတှငျးအဇ်ဈတ်တသန်တာနျမှ နာမျတရား အကွီးအမှူးဖွဈသညျ့ ဝီရိယဦးဆောငျရာသို့ ဆန်ဒ၊ စိတ်တ၊ ဝီမံသ တို့သညျလညျး ရညျမှနျးရာ ပနျးတိုငျဆီသို့ ပို့ဆောငျပေးတော့သညျ။
ဆန်ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတ်တ၊ ဝီမံသ လေးပါးလုံး တပွိုငျတညျး အဓိပတိမရပါ။ အကွောငျးမှာ အဓိပတိဟူသညျ ရှငျဘုရငျဖွဈသဖွငျ့ ပွိုငျဘကျကငျး၏။ ထို့ကွောငျ့ ဆန်ဒကအဓိပတိဖွဈပါက ကနျြသူတို့ နောကျလိုကျဖွဈပွီး ဆန်ဒခိုငျးသမြှကို လုပျပေးရသညျ။
ဆန်ဒက ပစ်စယ အကွောငျးတရားဖွဈလြှငျ ကနျြသုံးပါးက ပစ်စယုပ်ပနျ အကြိုးတရားဖွဈ၏။ စွင်ျကာမငျးဟူသညျ ဤကမ်ဘာမွပွေငျ၌ တဈဦးတညျး ပိုငျစိုးအုပျခြုပျသကဲ့သို့တညျး။
ဝီရိယဦးဆောငျလြှငျလညျး ကနျြသူတို့က နောကျလိုကျဖွဈ၏။ လောဘစတေသိကျက စိတျကို ခယျြ လှယျပွီး လောဘစိတျ ပွငျးထနျလာပါက လောဘစိတျက အဓိပတိဖွဈတော့၏။ ကနျြသူတို့ နောကျလိုကျ အဖွဈ လောဘစိတျအလိုကြ ဆောငျကဉျြးပေးရပတေော့မညျ။
မကောငျးသော အကုသိုလျလုပျဆောငျမှုအစုစုတို့၌ ဓမ်မသဘာဝကပငျ အသိအလိမ်မာ ဉာဏျပညာ ဝိဇ်ဇာ အမောဟမပါဝငျသောကွောငျ့ စိတျဇောအားကွီးသညျနှငျ့ အမြှ၊ ဝီရိယထကျသနျသညျနှငျ့အမြှ၊ ဆန်ဒ ပွငျးပွသညျ နှငျ့အမြှ တိုး၍တိုး၍သာ မိုကျကွပတေော့သညျ။ အကွောငျးမှာ ဝီမံသပညာ၏ ဦးဆောငျလမျးညှနျမှု မရသော ကွောငျ့ပတေညျး။
အဓိပတိပစ်စညျး၊ ပစ်စယုပ်ပနျ၊ သုဒ်ဓသင်ျခြာနှငျ့ မြိုးတူပစ်စညျး
ပစ်စညျးဟူသော အကွောငျးတရားမှာ ဆန်ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတ်တ၊ ပညာပစ်စယုပ်ပနျ ဟူသော အကြိုးတရားမှာ ယှဉျဖကျစတေသိကျနှငျ့ စိတ်တဇရုပျမြားတညျး။
ပစ်စယနေ ပစ်စယော = အကွောငျးတရားက အကြိုးတရား ဖွဈပျေါအောငျ ကြေးဇူးပွုသညျ။ (တနညျး အားဖွငျ့ အကွောငျးတရားရှိလို့သာ အကြိုးတရားဆိုတာ ဖွဈပျေါနိုငျတယျ)
Reality. ပရမတျ Concept. ပညတျ